I-BTS yeHlabathi loKuboniswa kweZinto eziPhuculayo umxholo we-Ar | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-BTS yeHlabathi yoKhenketho ibonisa iiNdawo eziDala ukuPhula imixholo ye-AR
I-BTS yeHlabathi yoKhenketho ibonisa iiNdawo eziDala ukuPhula imixholo ye-AR
-Ukhenketho oluhlaziyiweyo lusebenzisa ukuguqula isisombululo sokuhamba komsebenzi kunye nezixhobo ezinamandla zokuguqula izixhobo ukuze zisebenzise amandla amakhulu okhenketho lwe-AR-
London, UK, 9 Oktobha 2019 -Iqela labafana iBTS ithengise ngaphezulu kwee-albhamu ze-15 ezigidi, kwilizwe lonke, bezenza iingcibi ezithengisa kakhulu eMzantsi Korea ngalo lonke ixesha. Baqhubeka nolawulo lwabo lwehlabathi ngabalandeli abanomdla kwihlabathi liphela ngo'thando lwabo: Zithethele ngokwakho 'ukhenketho lweHlabathi.
Utyelelo lomhla we-20 lulwandiso lwebala lokuphumelela kweyona band iphumeleleyo eqale e-2018 kwaye yamkelwe kakuhle, kunye nemidlalo yeLondon Wembley Stadium ithengisa ngaphandle kwemizuzu emibini yetikiti. Imveliso enobuchule isebenzisa ukufihla iiseva ze-gx ze-2 ukuhambisa umxholo wevidiyo, ukudibanisa umxholo wokuvelisa kunye nokunika umxholo we-AR.
Inkampani yolawulo iBig Hit Entertainment, abalawuli boYilo uCwangciso A kunye nabaqulunqi bemveliso IFragmentNine ithathe ukhenketho njengomthendeleko omkhulu kunye nengoma nganye kwiseti eyenzelwe ukunxibelelana nabalandeli, eyaziwa ngokuhlangeneyo njenge-ARMY. Okwenziweyo kubandakanya izinto ezingenaxabiso, i-cannon yamanzi, umgubo wompu kunye nezinto zokucima umlilo kunye nokuthatha inxaxheba kwabaphulli ngeentonga ze-ARMY BOMB eziphathwayo. Kwingoma ethi "Trivia: Uthando" imo engaqondakaliyo idalwa ngokusebenzisa i-live ye-live, eyokuqala kwikonsathi ephilayo.
I-LIVE-LAB Co, Ltd. (UkuKhanyisa kunye neLebhu yeeMvakalelo eziBonakalayo) yacebisa ukusebenzisa imfihlo yokundwendwela "ngenxa yokuguquguquka nokuzinza kwabo ekujonganeni nokutshintsha kwezinto ngexesha lotyelelo olude," utshilo u-CEO u-Alvin Chu. I-LIVE-LAB liqabane lesitayile esifihlakeleyo esiseSeoul.
Uzalelwe ngaphandle kweencoko phakathi kweBig Hit, uCwangciso A, kunye neFragmentNine weza nombono wokusebenzisa iNqaku leNqaku leNdalo leThutyana: Uthando. Iqela lalinevidiyo ekubhekiswa kuzo eyayiyinyanzeliso yokutsiba i-point, kodwa i-AR yayingafumaneki.
Umsebenzi wokuguqula le mibono inamaphepha ibe yinyani, iFragmentNine, equka abaqulunqi abaziintloko uJeremy Lechterman noJackson Gallagher, bafikelela kubalingane babo kunye nabahlobo bexesha elide kuyo yonke loo nto ngoku (AOIN) ukuqala ukuphonononga amathuba.
Kwezi veki zilandelayo, izimvo ezininzi zazingqubana phakathi kwawo wonke umntu de ekugqibeleni babe banokufika kwisimbo kunye nokuqhubela phambili kwengoma. Umxholo we-AR ekugqibeleni wawunamagama, imilo, kunye nentshukumisa yentliziyo anokuthi umdwebi anxibelelane nayo.
Kwimveliso yokuziqhelanisa, i-AOIN yakha imodeli yenqanaba lesigaba sokuvavanya iikhamera ze-AR kunye nokulandelela okuhamba kuba oku yayingengombono onokuthi uphume nje esherfini, kwakufuneka ucweyo. Oku kwavumela i-FragmentNine, uCwangciso A, kunye ne-AOIN ukwenza uphononongo kumxholo kunye ngaphambi kokuziqhelanisa nokuzalisa.
I-AOIN yanikwa umsebenzi wokudibanisa i-AR kwimidlalo yeholo elisebenzisa ikhamera ekhoyo kunye nenkqubo yevidiyo, eyayingeyona nto incinci. Ukhenketho kukholelwa ukuba lolokuqala ukusebenzisa i-AR kukhenketho lwebala lemidlalo oluninzi.
"Ngobuchule kufuneka sincedise amagcisa, abaphathi kunye nemveliso baqonde ukuba yintoni equlathwe ngumxholo we-AR kwaye iza kujongeka njani," ucacisa uKevin Zhu, omnye wabaYili boMxholo be-AOIN we-AOIN. "Oku kubandakanya ingxoxo eninzi kunye nemfundo yabathengi kwizinto eziphembelela imveliso yokuphela: ukukhanya, ubungakanani / ubukhulu, umbala, ukuqamba iipleyiti zangaphambili nokunye. Olu hlobo lwengxoxo luyimfuneko kuba itekhnoloji kunye nokuphunyezwa kwemizobo ye-AR yayintsha kakhulu kubachaphazelekayo abaphambili. Ekugqibeleni, ibingamava amahle okufunda macala onke, kwaye siya kuqhubela phambili ezinye zezi zifundo phambili kwiiprojekthi. ”
Kwicala lobuchwephesha, i-AOIN kwafuneka yoyise ukungaziwa okunxulunyaniswa nokudityaniswa kokusebenza kwe-AR, amanqaku uMvelisi kunye noMyili weeMxholo ze-AR, uBerto Mora. "Senze uvavanyo oluninzi ngaphakathi kwistudiyo sethu apho yonke into isebenza khona kwindawo elawulwayo, kodwa xa ukwindawo yakho kufuneka ujongane nemicimbi yangempela yehlabathi. Kuba uninzi lwale teknoloji intsha, kufuneka sijongane nemicimbi emininzi engaziwayo kunye neempawu ezingabhalwanga. Ukusebenza ngokusondeleleneyo namaqabane ethu, njengokufihla, kusivumela ukuba sifeze oko sikufunayo ukwenza la maphepha okusebenza asebenze kwihlabathi lokwenyani. ”
Ngokutsho koMvelisi oLawulayo we-AOIN uDanny Firpo, "Ukuqonda indlela ezenziwa ngayo kwinqanaba kwinqanaba lezemidlalo ibiyinto ebalulekileyo. Ukuphakama kwenqanaba lokumiswa kwenkundla kuthetha ukuba umlingisi waphantse wamncinci kakhulu ukuba angabonwa mntu ngaphandle kwalawo angaphambili. Ipesenti enkulu yababukeli bebeya kubona lo mdlalo kwaye babukele umdlali oza kwenza i-IMAG kwizikrini ngemiphumela ye-AR. "
Ukuhamba komsebenzi ofundisayo kwakubalulekile ekwenzeni izigqibo zobuchule bokuyila ngaphandle kokuseta i-rig epheleleyo. UFirpo uyacacisa, "Sisebenzise imephu yendawo ekwi-gx 2 entle kakhulu, eyasivumela ukuba sikwazi ukuvala zonke izikhundla zekhamera kunye neziphumo ze-AR kwinqanaba elifanelekileyo ngaphakathi kwistudiyo sethu. Abaphathi banakho ukuvuma utshintsho kunye nokuhlaziywa kusetyenziswe kwinqanaba lokufihlakala kunika ividiyo njengommeleli wokwenza into kanye.
Ukudityaniswa kokuzifihla ngenkqubo yokulandela ikhamera ye-stYpe kuvumele i-AOIN ukuba idibanise izinto zekhamera ebonakalayo kwisoftware ye-GUI ye-lens yexesha lexesha kunye ne-6D yedatha yesikhundla iyunithi ye-stYpe efunyenwe kwikhamera kunye nemveliso yokusasaza. Inkqubo yeRedspy ye-stYpe yayisetyenziselwa ikhamera ephethwe ngesandla, kwaye intloko yokulandelela iVinten yayisetyenziselwa ukulandelela ikhamera yesitishi kwindawo yokunyusa ikhamera ye-FOH.
"Kwakufuneka senze inqanaba elifanelekileyo kunye nelona nqanaba lokwenyani, kwaye sakwazi ukubona oku kulungelelaniswa ngokudlalwa kwekhamera ephilayo kwi-gx 2," ucacisa uMyili weNjineli ye-AR u-Neil Carman. “Ke kaloku ukufihla ukuba sisixhobo esinamandla sokwenza into ngexesha elifanelekileyo esisincedileyo saqonda uhlengahlengiso ekufuneka silwenzile ukuba nembono kunye nesikhundla. Izinto zexabiso zenqanaba esithe saziswa yiFragmentNine kuthi ukulungiselela le projekthi zafikelela kwinqanaba lehlabathi. Ukwazi ukungqinisisa isoftware efihliweyo yenza ulungelelwaniso lwehlabathi lokwenyani kunye nelizwe elibonakala ngokulula. ”
Nje ngokufihla ukuba zonke iinkqubo ze-Stype ezixhumeneyo zivumelane kwindawo ebanzi ye-zero, apho yonke imizobo iya kuvela khona, iserver yavumela i-AOIN ukuba ijikeleze ngokuthe ngqo imiba ethile yemizobo ukusuka kumacandelo ahlukeneyo ngexesha lokuziqhelanisa. Oku kuncedwa yi-AOIN ekuchwayitweni kweentshukumo ezisebenzayo phakathi kwabadlali kunye nemizobo. "Uzinzo lwekhompyuter kunye nokuguquguquka kwesoftware kwiseva yokufihla kunegalelo elikhulu kwimpumelelo yokhenketho olude," utshilo u-LIVE-LAB's Chu.
"Ukulawula umfanekiso oqikelelwe kwiscreen esikhulu se-LED kubalulekile kulungelelwaniso olupheleleyo lwezinto, kwaye ukufihla kubonisa amandla azinzileyo kunye namandla," wongeza uMlawuli weCreative Kevin Kim weSicwangciso A.
UJackson Gallagher noJeremy Lechterman babengabaYili boMveliso abakhenketha abavela eFragmentNine.
Ukufihla iqonga lobugcisa ubugcisa bokuyila nobugcisa ukucinga, ukwenza kunye nokuhambisa amava abonakalayo aphilayo abonakalayo kwinqanaba eliphezulu.
Ngokujolisa ekudibaniseni isoftware ye3D yexesha langempela lokubonakalisa kunye nokusebenza okuphezulu kunye nezixhobo ezomeleleyo, zenza ukuba ukuhanjiswa kweeprojekthi zoyilo ezinomngeni kwinqanaba kunye nokuzithemba.
Ukuguqula ingqiqo ibe yinyani, ukufihla kuneeofisi ngaphakathi ELondon, eHong Kong, eNew York, los Angeles kunye neShang, kunye namaqela obugcisa kuwo onke ukuxhasa iimfuno zabathengi, kunye nokuthengisa okurekhodiweyo kumazwe angaphezu kwe-50.
Ngonxibelelwano lwehlabathi olwandayo lwehlabathi kunye nokusebenza kunye nabaqulunqi abanetalente ebonakalayo kwihlabathi kunye namaqela obuchwephesha kwihlabathi Ukhenketho lwekonsathi amagcisa, kubandakanya i-U2, Amatye ajikelezayo, iBeonconcé, Pink! kunye no-Ed Sheeran, Imicimbi ephilayo, kubandakanya uCoachella kunye noMthendeleko waMazwe ngaMazwe eMoscow, imiboniso yethiyetha ezinje ngoFrozen noHarry Potter kunye nenani elikhulayo le iifilimu, iinkqubo zosasazo zeTV, iinkqubo zenkampani kunye nezolonwabo -Fihla into yokwakha isizukulwane esilandelayo sezixhobo zokusebenzisana ukunceda amagcisa kunye nabachwephesha ekuqondeni umbono wabo.
Izithuba zamva nje zika-Amisa Saari-Stout (ndinibone nonke)
I-CODEX ihlonitshwe ngobuNjineli bobuGcisa i-Emmy ye -CODEX RAW yokuhambahamba komsebenzi ngeKhowudi yokuDibanisa okuphezulu - Oktobha 13, 2020
IBrown Qaphela iiMveliso zeHits Dlala kwiNqaku leKhonsathi elungileyo - Septemba 29, 2020
I-LWKS iqinisekisa ikamva elizimeleyo le-Lightworks NLE kunye ne-QScan AQC - Septemba 15, 2020
Nyaniso eyongeziweyo imbonakalo engokoqobo (AR) imifanekiso ikonsathi ukuguqula ukudityaniswa umsitho ophilayo A / V Umncedisi wemidiya Imikhonto kunye neentolo TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo 2019-10-09
Previous: I-Goldcrest Post kunye nabaCebisi beCinePointe ukuba babambe iworkshop yokuhanjiswa kwefilim
next: I-CCTV iyaphumelela kuDrike lweBeather Rato nge-Lectrosonics Digital Hybrid Wireless